सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज : गेटालाई बेवास्ता, प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लालाई ‘फेभर’ – Health Post Nepal
सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज : गेटालाई बेवास्ता, प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लालाई ‘फेभर’
२०७९ जेठ १२ गते १२:०७
काठमाडौं–९० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण सकिएर सञ्चालनको तयारी अवस्थामा पुगेको गेटा मेडिकल कलेजलाई छाडेर प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पारिएपछि विवाद सुरु भएको छ।
गेटा मेडिकल कलेजको विषय नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटेको विरोधमा बुधबार अत्तरियामा चक्काजामसमेत भयो। बिहीबार वृहत नागरिक दबाब समूहले आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सा सेवा सञ्चालन गर्न बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार बिहीबार १० बजेदेखि हस्ताक्षर संकलन र एलएन चोकमा धर्ना, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र र बिहीबार साँझ नै पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
यस्तै, १३ गते बिहान ८ बजे गेटा मेडिकल कलेजमा सांकेतिक विरोधस्वरुप नागरिक स्तरबाट स्वास्थ्य सेवा परीक्षण गर्ने र थप आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः तय गरिने दबाब समूहले जनाएको छ।
दबाब समूहमा रहेका पत्रकार मनमोहन स्वाँरले भनेका छन्, ‘प्रदेश सरकार एयरलिफ्टीङलाई स्वास्थ्य सेवाको सबैभन्दा महान कार्यका रुपमा व्याख्या गरेर थाक्दैन। हाडनसा, प्रसूति सेवा, मुटुरोग, क्यान्सरजस्ता रोगबाट ग्रसित बिरामीहरु घरखेत बेचेर उपचारका लागि काठमाडौं, भारतका अस्पताल धाउन बाध्य छन्। स्वार्थैस्वार्थमा मात्रै तल्लीन हाम्रा नेता, स्वास्थ्य क्षेत्रका कथित विशेषज्ञ, मेडिकल माफियासहितका स्वार्थी समूहहरु अहिले अनेक बहाना बनाएर गेटा मेडिकल कलेजलाई दन्त्यकथा बनाउन उद्धत छन्। अनि सरकार अर्को मेडिकल कलेजको नाटक रच्दैछ।’
गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने कि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनेर सरकार अझै स्पष्ट छैन। ‘गेटालाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउँछौै? कि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउँछौं, अथवा अत्याधुनिक अस्पताल? जेसुकै बनाउ, तर अब सहन सकिँदैन। गेटा मेडिकल कलेजमा तत्काल विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि अब हामी जनता जाग्नै पर्छ,’ स्वाँर भन्छन्।
गेटालाई छुट्टै मेडिकल कलेज नबनाएर सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत डडेलधुरामा मेडिकल कलेज रहने र त्यसकै मातहतमा गेटाको भवन रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ। तर गेटालाई छुट्टै स्वायत्त संस्थाको रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
कसरी सुरुवात भयो गेटा?
२०४४ सालतिर शंकराचार्यले गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनेर केही जग्गा किने। २०५६ सालमा सरकारले गेटा आँखा अस्पतालअगाडिको ७७ विघा जमिन मेडिकल कलेज स्थापनाका लािग सरकारले शंकराचार्यले स्थापना गरेको जयन्त सरस्वती स्वर्ण महोत्सव ट्रस्टलाई दियो। तर ७ वर्षसम्म मेडिकल कलेजको काम अगाडि बढेन। त्यसपछि २०६२ सालमा स्थानीयलाई सो जग्गामा सामुदायिक वन जगेर्ना गर्न भनियो। तर, २०६५ सालमा सरकारले पहिलो पटक गेटा मेडिकल कलेजका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गर्‍यो। त्यसपछि हरेक वर्ष केही रकम विनियोजन हुँदै आयो।
२०७३/७४ सालबाट गेटामा मेडिकल कलेज निर्माण थालियो भने अहिलेसम्म ९० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण सकिइसकेको छ। कलेजको प्रशासनिक भवन, छात्रावासलगायतका संरचना निर्माणको काम सकिएको छ भने ६ वटा छात्रावास भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ। मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका अनुसार ६ सय शय्या क्षमताका २ वटा अस्पताल भवनको निर्माणको काम सकिएको छ। अहिलेसम्म २७ वटा भौतिक संरचना निर्माणको काम सकिएको छ।
यस्तै, खानेपानी, अक्सिजन प्लान्ट, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढलपानी निकास, विद्युत सवस्टेसनलगायतको काम भने बाँकी छ।
डडेल्धुराको कुरा पनि त्यत्तिकै आएको हो त?
डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको कुरा पनि अहिले त्यत्तिकै आएको होइन। चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा गोविन्द केसीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय हो।
डा केसी २०७५ असार १६ गते जुम्ला पुगेर १५ औं अनसन बसे। जसमा उनले एउटा माग थियो–डोटी–डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गरिनुपर्ने। जुम्लामा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई काठमाडौं ल्याइयो। काठमाडौमा पनि उनले अनसन जारी राखे।
त्यसपछि २०७५ साउन १० गते डा केसीको २७ दिन लामो अनसन तोडाउने क्रममा सरकारसँग ९ बुँदे सम्झौता भयो। जसको दोस्रो नम्बर बुँदामा ‘पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअगाडि नक्सांकन भएका ठाउँहरुको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने’ भनिएको थियो। त्यसअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गर्‍यो।
त्यसपछि २०७६ कात्तिकमा डा केसीले डडेल्धुरामै पुगेर १७ औं अनसन गरे। उनको त्यतिबेलाको प्रमुख माग पनि सरकारले २०७५ साउन १० गते आफूसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नै थियो।
यसबाहेक त्यतिखेर कांग्रेस नेताहरु वीरबहादुर बलायर, भक्तबहादुर बलायरसहित त्यसक्षेत्रका नेता एवं पूर्वमन्त्रीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर डोटीमा मेडिकल कलेज स्थापनाको दबाब दिएका थिए। डडेल्धुराका नेताहरुले पनि ‘डडेल्धुरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ को माग गरेका थिए।
अभियन्ता डा केसीले देउवाले सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै गत साउनमा सरकारलाई खबरदारीपत्र पठाउँदै डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको विषयलाई पुनः स्मरण गराएका थिए। उनले खबरदारीपत्रमा भनेका थिए, ‘हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ।’
स्थानीयस्तरमा डोटी या डडेल्धुराका जसले दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्रीले गृहजिल्लालाई नै ‘फेभर’ गरे। गत माघ दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍यो। सोहीअनुसार सरकारले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयलाई समेटेको हो।